Spiro: Fifanakalozana varotra mavitrika amin'ny fampiasana AI | Martech Zone
Spiro: Fifanakalozana varotra mavitrika amin'ny fampiasana AI
Talata, Aogositra 25, 2020 Alarobia 26, 2020 Douglas Karr
Spire Mampiasa saina marani-tsaina mba hanomezana tari-dàlana ho an'ny mpitarika ny varotrao sy ny solontenan'ny varotrao dingana manaraka tsara indrindra manampy amin'ny fisorohana ny fotoana very sy mampitombo ny vokatra varotra.
Ny mpanjifa Spiro dia mitatitra valiny mahatalanjona sasany, ao anatin'izany:
Ny fahaizana manangona 16 angona bebe kokoa
Ny fahaizana ho anao na ny ekipan'ny varotrao mahatratra 30% ny vinavinam-bola bebe kokoa amin'ny fe-potoana mitovy.
Ny fahafahana varotra akaiky 20% bebe kokoa efaha
Tombontsoa azo avy amin'ny Spiro
Spiro dia manolotra fomba vaovao amin'ny automatisation sales: fitantanana fifandraisana mavitrika.
Asongadino ireo hetsiky ny ekipa - Ny Spiro Assistant dia manome ny lisitry ny laharam-pahamehana isan'andro ho an'ny mpampiasa AI sy ireo lahasa vokarin'ny mpampiasa izay manatsara ny vokatra.
Ampitomboy ny famokarana ekipa - Ny fiantsoana VoIP namboarina sy ny lisitry ny antso novokarin'ny AI dia mamela ny ekipa hahatratra ny vinavina bebe kokoa, ary ny fitrandrahana antso mandeha ho azy dia mampitombo ny fahombiazan'ny ekipa.
Hamarino ny fandraisana andraikitra mavitrika - Spiro dia manome fampahatsiahivana fanaraha-maso mihetsika miorina amin'ny resadresaka mba hahazoana antoka fa tsy misy fifanarahana mandalo ireo triatra.
Hamafiso ny fivoaran'ny fifanarahana - Spiro dia mamakafaka ny laharam-pahamehana ary mifantoka amin'ireo fotoana mety hanakatonana ireo reps.
Ampitomboy ny taha-pandresena - Spiro dia manome ny fahitana fantsom-pivoarana feno sy ny fomba fiasa azo tsaboina mba hanakanana ny fisorohana ny fifanarahana very.
Vinavinan'ny varotra - Spiro dia manome fahitana feno ao amin'ny fantsom-pifandraisanao ary manome isa ny fifampiraharahana mba hanatsarana ny marina.
Spiro dia tsy manolo fitaovana automatique marketing (fa kosa, izy ireo dia miombona amin'ireo fitaovana ireo), fa afaka mandefa mailaka atokana ho an'ireo lisitra kendrena misy fifandraisana 500 ianao, miaraka amin'ny fahaizana mandamina azy ireo amin'ny ora sy daty ho avy.
Manaova fandaharana Demiro Demiro
Misaotra manokana an'i Sheryl tao KabinetraM ho an'ny mahita!
Tags: aicabinetmmampitombo fifanarahanamampitombo ny fivarotana mihidyvarotra ivelanyfifampiraharahana amin'ny varotra mialohaFanamafisana ny varotrafifampiraharahana amin'ny varotrahetsiky ny ekipa mpivarotrafamokarana ekipa fivarotanaSpiroVOIP
Mampiasà fotoana tsy mbola nisy toa azy hanamboarana ny fomba fiasanay